Yakanakisa Green House Girazi & Solar Girazi Solutions Mugadziri uye Fekitori |Jinjing
Nekufambiswa kwechiedza chepamusoro chegirazi rakajeka uye kugona kugadzirisa, Jinjing inova mutengesi mukuru wemusika wepasi rose wegreenhouse & solar energy.Jinjing solar low iron girazi rinoshandiswa zvakanyanya kune solar PV, solar thermal uye zvimwe zviwanikwa zvesimba zvitsva.Inogona kugadzirwa senge superstrate ye solar PV cell (kumberi kwepanhi remutete firimu cell), chivharo chendiro yeflat-mhando solar thermal muunganidzi, girazi remuunganidzi wesimba rinopisa rezuva, solar greenhouse, solar curtain wall, front panel concentrated solar cells and etc. .
Sei Kusarudza Jinjing?
Yese girazi indasitiri cheni kugadzirwa uye yekutanga fekitori kugadzirisa inovimbisa yakakwirira mhando yekutonga kwegirazi kubva kumusoro: gumi nematatu mitsara inoyangarara, mamirioni makumi maviri ㎡ yepamhepo Low-E kugadzira kugona & miriyoni gumi ㎡ offline Low-E mutsara, 2 magirazi maitiro mabhesi.
Lisec, Bottero，Glaston，Bystronic…… Advanced processing equipments inova nechokwadi chemhando yepamusoro & kushanda kwegirazi.Inoenderana neEuropean EN12150 uye North American SGCC zvimiro.
Yakazara yemhando yekudzora sisitimu kuti ive nechokwadi chemhando yakanaka yegirazi mayuniti, kubva kune yakasvibira kusvika kukucheka, kumucheto kukuya, kupisa, laminating uye insulating.
Kuendesa: Kubva pane zviwanikwa zveJinjing girazi uye kugona kugadzirisa, zvigadzirwa zvinogona kuendeswa nenguva.
Hunhu Warranty: Anopfuura makore gumi 'greenhouse girazi rekugadzira ruzivo rwakanyanya zvinoenderana neEuropean standard.
Chigadzirwa chakateerana: greenhouse girazi rine akasiyana ekufambisa (89-91%) uye diffuse girazi.
Mucherechedzo: Imwe yeanonyanya kupesvedzera greenhouse glass brands muChina.
Pamhepo TCO girazi: TCO girazi igirazi resoda inoyangarara yakavharwa neyakajeka conductive oxide coating yekushandiswa kweiyo nhete-firimu photovoltaic masero.Mune 3.2mm ukobvu, iyo yakanaka chiyero pakati pekutapurirana, mhute uye conductibility yeTCO coating inogona kuvandudza kubuda kwesolar cell.
Chiedza Chekufambisa (NEN2675)
> 91% yegirazi yakadzikama yesimbi inoyangarara
> 89% yegirazi rakadzikama rinoyangarara
inokwana 3mm pa1000mm
yakawanda 0.5mm pa300mm
Greenhouse:Nekufambiswa kwechiedza chepamusoro chegirazi rakajeka uye kugona kugadzirisa, Jinxing inova mutengesi mukuru wemusika wepasi rose wegreenhouse.
Substrate yeakaonda firimu PV modules:Neyepamusoro solar transmittance, inogona kuvandudza shanduko inoshanda ye solar PV modules.
Flat plate solar thermal collectors:Nekufambiswa kwepamusoro, inogona kuvandudza shanduko yevanounganidza solar thermal.
Solar Mirror:Kutora mabhenefiti akazara eakanyanya epamusoro reflectivity yeUltra yakajeka girazi girazi, inogona kuvandudza mashandiro emafuta, nekudaro ichiwedzera kushanda kwese kwesimba rekupisa kwemagetsi.
BIPV chirongwa:Ultra yakajeka girazi rinoyangarara rinogona kushandiswa kune ese ari maviri epamberi girazi uye kumashure girazi retete-firimu solar cell.Sezvo chirongwa cheBIPB, chinogona kugutsa kwete chete chinodiwa chekuvhenekesa kwemukati, asiwo iyo photovoltaic efficacy yekugadzira magetsi, ichava iyo huru yekusimudzira maitiro ekuvaka kweramangwana.
Kuita kwepamusoro kwakazara otomatiki kucheka & mitsara yekukuya kubva pakurodha kusvika pakubuda nechero chimiro chinodiwa uye saizi.
Lisec Otomatiki Kucheka Mutsetse
8 kupisa mavira ane gore negore ekugadzira simba pamusoro pemamiriyoni gumi neshanu ㎡.Inoenderana neEuropean EN12150 uye North American SGCC zvimiro zvine chekuita nekudzikama, simba, kupatsanurwa, hukuru uye kushivirira nezvimwe.
Zvakapfuura: Kuchengetedza Girazi & Decorative Girazi Solutions
Zvinotevera: Jinjing Yakagadzirirwa Girazi Solutions
F Green Float Girazi
F Green Girazi
French Green Float Girazi
ChiFrench Girazi Girazi
Girazi reGreen House
Green House Girazi
Solar Kudzora Girazi
Solar Control Yakaderera E Girazi